सावधान ! पतञ्जलि, डाबर, बैद्यनाथ र झण्डुका यी खाद्य बस्तु परीक्षणमा भेटियो डरलाग्दो रसायन – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सावधान ! पतञ्जलि, डाबर, बैद्यनाथ र झण्डुका यी खाद्य बस्तु परीक्षणमा भेटियो डरलाग्दो रसायन
काठमाडौं । नेपालमा लाखौं व्यक्तिहरुले विश्वास गर्दै आएको उत्पादनबारे सत्य खुल्दा सबै हैरान भएका छन् । भारतको विज्ञान तथा वातावरण केन्द्र (सीएसई) ले भारको ब्रान्डेड महमाथि गरेको अनुसन्धानबाट डरलाग्दो खुलासा भएको हो ।